Todoba Waxyaabood Oo Aadan ka Ogeyn Xiddiga Muslimka Ah Ee Adama Traore | Laacib.net
Todoba Waxyaabood Oo Aadan ka Ogeyn Xiddiga Muslimka Ah Ee Adama Traore
February 11, 2020 Balaleti Comments Off on Todoba Waxyaabood Oo Aadan ka Ogeyn Xiddiga Muslimka Ah Ee Adama Traore
Adama Traoré waa xiddig aad u orod badan, waxa uu leeyahay murqo waa weyn oo uu ugu xoog sheegto daafacyada, waana xiddig inta badan ka murjiya tababaraha Manchester City Pep Guardiola.
Laakiin waxaa laga yabaa inaad intaas ka ogeyn xiddigaan balse waxaan idiin soo gudbineynaa todoba waxyaabood kale oo aadan ka ogeyn weeraryahanka Wolves Adama Traore.
1- Wuxuu Noqon Karay Xiddig Ciyaara Kubada Mareykanka Ee NFL
Adama Traore ayaa noqon karay xiddig ka ciyaaraya kubada loo yaqaano American Football ee NFL. Traore asxaabtiisa ayaa wareysi ku sheegtay in horyaalka NFL ay isku dayeen inay la wareegaan Adama Traore markii uu ku jiray akadeemiga kooxda Barcelona.
Kooxaha NFL ayaa la dhacay orodkiisa iyo xoogiisa oo muhiim u ah ciyaarta kubada Mareykanka. Laakiin kubada cagta ayaa noqotay isboortiga kaliya ee uu jecel yahay.
2 – Naaneestii cajiibka ah.
Traore waa xiddig aad u xawaare dheereeya taasoo keentay inuu noqday xiddigii ugu sareeya dhanka qiimeynta orodka ciyaar gacmeedka FIFA 19. Markii uu ku jiray akadeemiga Barcelona waxaa naanees looga dhigay Usian Bolt madaama uu xawaare dheereeyay. Sida aan ognahay Bolt waa ninka ugu xawaare dheereeya dunida isagoo dhowr biladood oo dahab ah ku guuleystay.
Laakiin Traore ayaa ka soo horjeeda in lala barbardhigo Usain Bolt, isagoo ku dooday inuu ka orod badin karo Bolt haddii ay tartamaan.
“Sida iska cad Bolt waa uu iga badin karaa orodka 100ka mitir laakiin 30 mitir oo caws dushiisa ah oo kubadana ay cagta iigu jirto, waqti walba aniga ayaa badinaya” ayuu yiri Traore.
3 – Wuxuu ku hadlaa lix luqadood
Madaama uu ka soo jeedo qoys ugu yaraan labo luqadood ku hadashada, Traore wuxuu ku hadlaa lix luqadood.
Wuxuu ku hadlaa luqada Mali looga hadlo ee Bambara, Isbaanish, Catalan madaama uu Barcelona ku koray. Ka dib wuxuu bartay Ingariis mudadii uu joogay Premier League. Wuxuu kaloo ku hadlaa Faransiis iyp luqada Portugal.
4 – Qoys kubadeed ayuu ka soo jeedaa
Sannadkii 2004 Lionel Messi ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqanayay kooxda koowaad ee Barcelona isla sannadkaas Traore waxa uu ahaa sideed jir ku biiray akadeemiga Barcelona laakiin walaalkiis Mohammed ayaa ku biiray kooxda ay Barcelona xafiiltamaan ee Espanyol.
Traore walaalkiis ka weyn ayaa isna ku xamaasha kubada cagta isagoo u ciyaara kooxda heerka labaad ee Spain ee lagu magacaabo Herluces.
5 – Rekoodh ayaa ku heystaa gambinta
Intii u dhaxeysay 2017 iyo 2018 waxa uu sameeyay gambis ka badan inta ay sameeyeen ciyaaryahan kale oo ka ciyaara horyaalka heerka labaad ee Ingariiska.
Xaqiiqdiina gambiskiisa waxa uu ku laba jibaarmay inta uu sameeyay ciyaaryahankii ku soo xigay ee horyaalka. Celcelis ahaan waxa uu sameyn jiray 5.8 gambis ciyaartii, gambiskiisa waxa uu sabab in inta badan qalad lagu galo, wuxuu noqday xiddiga qaladka ugu badan lagu galay horyaalka Premier League.
6 – Wuu Ilowsho badan yahay
Traore ma ahan ciyaaryahan la ilaawi karo laakiin isaga ayaa ah ciyaaryahan ilowsho badan. Mar ay kooxdiisa u safreysa Armenia si ay ugu soo ciyaarto Europa League wuxuu soo ilaaway baasaboorkiisa, sababtaas darteed ayuuna ku seegay kulankaas.
Mar kale intii uu joogay Spain waxa uu soo ilaaway kabihiisa iyadoo weliba ay ciyaar muhiim ah jirto oo ay la ciyaarayaan kooxda Espanyol.
7 – Biraha gym-ka ma qaado
Waa ay adag tahay in la aamino arintaan madaama uu si weyn u dhisan yahay islamarkaana uu murqo weyn leeyahay. Xiddiga garabka ka ciyaara ayaa qiray arintaan:
“Marnaba ma qaado biraha gym-ka waan ogahay inay adag tahay in la aamino, laakiin xoogeyga waa dhaxal, waana ogahay in muuqeyga uu ka weyn yahay ciyaaryahan kubadeed.